रोमी २:७-१० – Word of Truth, Nepal
पद ७– असल गर्नेलाई परमेश्वरले यसरी इनाम दिनुहुन्छ। (क१)
पद ८ — खराब गर्नेलाई परमेश्वरले यसरी दण्ड दिनुहुन्छ। (ख१)
पावलले यहाँ असल कामहरू गरेर अनन्त जीवन कमाइन्छ भनेर सिकाउँदैछन् कि जस्तो देखिन सक्छ। “अनन्त जीवनको अधिकारी हुन मैले के गर्नुपर्छ?” पहिलो झलकमा पावलको उत्तर यस्तो भएजस्तै देखिन्छ: “अनन्त जीवन पाउन तिमीले धैर्यताका साथ असल कामहरूमा लागिरहनुपर्छ।”(पद ७) अथवा “अनन्त जीवन पाउन तिमीले असल कर्म गर्नुपर्छ।”(पद १०)। यस ईश्वर-शास्त्रीय समस्यालाई हल गर्न निम्न बुँदाहरूलाई विचार गरौं:
“असल मानिस स्वर्ग जान्छन् तर खराब मानिस नरक जान्छन्” भन्ने भनाइ मानिसमा व्याप्‍त एउटा गलत अवधारणा हो। यसको तुलनामा तलका कुरालाई विचार गरौं:
लूका १८:९-१३ मा बयान गरिएको फरिसी धर्मकर्ममा लिप्‍त थियो, नैतिकवान् थियो, र धेरै असल कर्महरू गर्ने उसको आदत थियो। पद १४ अनुसार के यो “असल मान्छे” स्वर्गमा भेटिएला त?
ख्रीष्टसँगै क्रूसमा टाँगिएको एक जना अपराधीले — जसले पश्चात्ताप गरेको थियो — निःसन्देह ऊ एक “खराब मान्छे” थियो, र पनि ऊ स्वर्गमा भेटिनेछ कि (लूका २३:४२-४३)?
“धीरजसँग असल काममा” लागिरहनेहरू (पद ७) जोहरू धीरजसँग असल काममा लागिरहँदैनन्
जोहरू स्वार्थी छैनन् जोहरू “झगडालु” (स्वार्थी) छन् (पद ८)
जोहरू सत्यता पालन गर्छन् जोहरू “सत्यता पालन गर्दैनन्” (पद ८)
जोहरू अधर्म पालन गर्दैनन् जोहरू “अधर्म पालन गर्दछन्” (पद ८)
जोहरू दुष्ट काम गर्दैनन् जोहरू “दुष्ट काम” गर्दछन् (पद ९)
जोहरू “असल काम गर्ने” हरू (पद १०) जोहरू असल काम गर्दैनन्
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 10:23:312020-05-18 13:59:03रोमी २:७-१०
रोमी २:१-६ रोमी २:११-१५